Sonos dhaqaaq, wax kasta oo aad weydiin karto afhayeenka | Wararka IPhone
Waa mid ka mid ah faallooyinka soo noqnoqda marka aan ka hadlayno qof ku hadla tayo leh, oo leh 'AirPlay' iyo kaaliye macmal ah, haddii loo yaqaan HomePod, Sonos One ama nooc kale oo suuqa yaal: "Laakiin lama qaadi karo mana haysto Bluetooth. " Waxaa jira isticmaaleyaal badan oo Waxay rabaan ku hadla si buuxda u muuqda oo sidoo kale la geyn karo meel kasta iyada oo aan loo sadqayn tayada ugu sareysa.
Sonos ugu dambayntii wuxuu na siiyaa jawaab waana weyn yahay sidoo kale. Sonos Move-ka cusub wuxuu isu keenayaa dhamaan astaamaha dadka ku hadla Sonos, iyadoo tayada codka sare iyo sidoo kale suurtagalnimada in la geynayo meel kasta oo ay ugu mahadcelinayaan batteriga isku dhafan. Haddii tan aan ku darno Bluetooth iyo iswaafajinta Alexa iyo Kaaliyaha Google, ma weydiisan kartaa wax intaa ka badan?
3 Tayada codka
Sonos Move cusub wuxuu ina xusuusinayaa waxyaabo badan oo Sonos One ah, laakiin xaqiiqadu waxay tahay markii aan is ag dhigno midkeen midka kale waxaan ogaanay farqiga muuqda ee u dhexeeya labadooda. Waa weyn (240x160x126mm) iyo culus (3kg) ku hadla, sidaas erayga "la qaadi karo" waxa uu tilmaamayaa in ka badan suurtagalnimada in si bilaa xadhig ah loo isticmaalo marka loo eego in lala raaco. Fikradda Sonos Move waa inay ku haysato qolka fadhiga oo u qaado beerta, jikada ama barkadda, ma ahan inay ku dhejiso boorsada dhabarka oo ay nala raacdo safarro.
Sonos wuxuu u maleynayay naqshad joogto ah, oo la mid ah tan Sonos One laakiin ka badan oo wareegsan, iyo birtaas oo ku jirta dhammaan hore iyo dhinaca, oo ka tagaysa badhamada jirka (awoodda, isku xirka iyo Bluetooth / WiFi biiro) iyo isku xirka USB-C xagga dambe, iyo sidoo kale mashiin xambaarsan oo si fiican ugu dhex milmaya qaab-sameecadda lafteeda. Xagga sare waxaan leenahay badhamada caadiga ah ee taabashada 'Sonos' si loo xakameeyo loo maqalka iyo mugga, iyo sidoo kale makarafoonada dhaadheer si loo dhagaysto codsiyada aan u dirno Alexa ama Google Assistant.
Dib u soo kabashada batteriga waxaa lagu sameeyaa saldhiga lacag-bixinta, oo leh qaab giraan ah, aad u yar oo aad ugu raaxeysan in la isticmaalo, wax muhiim u ah afhayeenka miisaankan. Muhiim ma aha in lagu wareego xisaabinta booska afhayeenka milimitirka, kaas oo si fudud ugu habboon saldhiga. Haddii aad rabto, waxaan sidoo kale u adeegsan karnaa isku xirka USB-C si aan dib ugu buuxino, in kasta oo xeedhokan uusan ku jirin sanduuqa, laakiin wuxuu ku imaan karaa anfacaya marka aan safar galeyno oo aanan dooneynin inaan ku qaadanno saldhigga rasmiga ah anaga Batariga wuxuu bixiyaa tiro ilaa 10 saacadood ah, taas oo ku filan xitaa xafladaha ugu badan.
Sida caadada u ah Sonos, macluumaadka laxiriira qeexitaanada gudaha waa mid cabiran, waxaanan ognahay kaliya inay heysato labo kuhadal, mid seddex seddexle ah iyo mid kale oo bartamaha iyo baas, oo leh laba nooc oo D kordhiye. In kastoo aan ka hadli doonno tayada codka goor dambe, waan sii hormarin karaa inay runti tahay wax lala yaabo.. Waxay leedahay shax 6 makarafoon oo dhaadheer, oo si wanaagsan kuu maqla xitaa muusikada ku ciyaareysa heer sare (aad uga fiican Sonos One). Faahfaahin muhiim ah: u adkaysta biyaha iyo boodhka (IP56) iyo xitaa inuu dhaco, waxay muhiim u tahay sheyga loogu talo galay inuu dhaqaaqo.
Waxaan horey uga soo hadalnay munaasabado badan oo ku saabsan barnaamijka Sonos ee loogu talagalay macruufka, fududahay in la isticmaalo, dareen leh taasina waxay kuu ogolaaneysaa inaad laxiriirto akoonada Apple Music, Spotify iyo Amazon Music sidaa darteed hal app waxaad kuheleysaa dhamaan adeegyada muusikada ee qandaraaska lagusoo qaatay. Fiidiyowga waxaad ku arki kartaa habka qaabeynta ee Sonos Move, oo aad u faray barnaamijka laftiisa. Waxyaabaha soo fiicnaaday marka la barbar dhigo moodooyinka kale ee sumadda waa otomaatigga TruePlay. Sonos Move-kan wuxuu si otomaatig ah codka ula jaanqaadaa deegaanka markii uu ogaado inuu dhaqaaqay, si ka duwan moodooyinka kale ee u baahnaa nidaamka gacanta.. Hadal haye loogu talagalay inuu dhaqaajiyo qaabeynta otomaatigga ah ayaa gabi ahaanba lama huraan ahayd Sonosna wuxuu ku guuleystay horumarkan.
La jaanqaadida kaaliyeyaasha dalxiiska sida Amazon Alexa waxay noo ogolaaneysaa inaan xakameyno dib u ciyaarista codkeena, xitaa ogaanshaha waqtiga, ballanta jadwalka iyo wararka ugu dambeeya kaliya adoo weydiinaya kaaliyaha. Maaddaama Spotify iyo Apple Music, xitaa Amazon Music lafteeda ay iswaafajin karaan, waxaan codsan karnaa liiskayaga afhayeenka, ama talooyinkooda iyadoon loo baahnayn in la qaato iPhone-keena, ama la taabto afhayeenka.
Iswaafajinta AirPlay 2 waxay ka dhigan tahay inaan ku xakameyn karno Siri, laakiin maadaama aanan ku laheyn Siri gudaha afhayeenka laftiisa, waa inaan ku sameysanaa iPhone-keena, iPad-ka ama Mac-da. qalabkayaga, iyo waxaan kuqori karnaa kuwa kuhadlaya kaliya anaga oo dhex dhigeyna isla qolka, sidaa darteed waxaan ku raaxeysan karnaa dhawaq aad u badan oo baqshad leh oo lagu daray Sonos kale ama HomePod.
Kawaran hadaan aadno meel uusan WiFi ka jirin? Dhib malahan tan iyo adigoo riixaya badhanka gadaashiisa ayaa dhaqaajinaya isku xirnaanta Bluetooth. Tayada codka ma noqon doonto mid lamid ah tan loo maro WiFi, sidoo kale waxaan waayi doonaa caawiyeyaasha dalxiiska ah, maadaama ay u baahan yihiin xiriir internet si uu u shaqeeyo, laakiin ugu yaraan waxaan lahaan doonnaa sameecado aan biyuhu la socon oo leh cod iyo bahal dugaag ah.
Dhaqdhaqaaqa Sonos wuxuu la wadaagayaa astaamaha Sonos One, laakiin kaliya markuu arko cabirkiisa midna wuu qiyaasi karaa inuu dhawaqiisu hagaagi doono marka loo eego Sonos-ka yar Waxaan dhigi lahaa midig dhexda dhexe ee u dhexeeya Sonos One iyo Sonos Play: 5. Dhawaaqa ayaa aad uga awood badan, oo leh baasiis ka awood badan, iyo dabcan, iyada oo aan lagu qalloocin mugga sare. Abaabulka dadka ku hadla Sonos Move ayaa ka dhigaya "omni-directional" wax aan ahayn kiiska Sonos One, kuwaas oo hore u jeeda, sidaa darteedna Sonos Move uu buuxiyo qol ka fiican kan.
Maxaa dhacaya haddii aan isbarbar dhigno HomePod? Hagaag, kuuma sheegi karin labadooda midka dhawaqa fiican leh, in kastoo haa kee awood badan: Sonos Dhaqaaq bilaa shaki. Apple HomePod wuxuu leeyahay dhawaq aad ufiican, hodan ah oo aan u baahnayn mug aad u sareeya si uu ugu raaxeysto. Sonos Move-kan ayaa wadaagaya astaamahan, laakiin markaan dooneyno inaan "laad la kacno" waxay garaacaysaa HomePod shaki la'aan.
Hadana haddii aan ku isticmaalno batteriga, ma luminayso iota ka mid ah waxyaabaha kor ku xusan, taas oo si fudud dareen u leh. Haa runtii, haddii aan isticmaalno Bluetooth waxaan lumineynaa codka TruePlay, taasina waxay ka dhigeysaa marka la isticmaalayo isku xirnaanta hoos u dhac ku yimaada tayada ayaa la dareemay, maahan mid muhiim ah laakiin waa mid la mahdin karo. Sikastaba, 10 saacadood oo ismaamul ah, yaa isticmaali doona Bluetooth?
Haddii aad waligaa ka fekertay sida ay u fiicnaan laheyd inaad gurigaaga u qaadatid jardiinada, barkadda, ama jikada, ama sida raaxada leh ee ay u isticmaali laheyd Sonos One-kaaga musqusha intaad diyaar garoobeyso, markaa rabitaankaaga ayaa hadda la oofiyey. Sonos waxay shaqo fiican ka qabatay Sonos Move, Taleefan tayo sare leh, oo la qaadi karo oo leh ismaamul heer sare ah oo sidoo kale ilaaliya dhamaan astaamaha Sonos. Dabcan, waxay ku sameysaa qiimo sare oo ay tahay inaad bixiso: € 399 dukaamada sida Amazon (isku xirka). Laakiin dabcan, ma jiro afhayeen kale oo sidaas oo kale sameyn kara.
Bass wanaagsan iyo awood weyn
Xarakaadka iyo kartida Bluetooth
La jaan qaadi kara Amazon Alexa iyo Kaaliyaha Google
10 saacadood oo ismaamul ah
Batariga la bedeli karo
Weyn oo culus
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » iPhone » Qalabka IPhone » Sonos dhaqaaq, wax kasta oo aad weydiin karto afhayeenka
Fikradani waxay muujineysaa iPhone 12 Pro iyo afarta kamaradood